Izitezi ezishisayo: ziyini, izici nokuhlukaniswa | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Emkhakheni wemeteorology yezitshalo i phansi okushisayo ukwahlukanisa imichilo ehlukene echazwa ukuphakama kwentaba lapho ukwehluka kwamazinga okushisa nezinye izinto zesimo sezulu kwenzeka. Isimo sezulu esinqumayo ukuphakama ngaphezu kwezinga lolwandle futhi okuguquguqukayo okuyinhloko kwesimo sezulu okuthinteka kulesi simo sengqondo ukushisa.
Kulesi sihloko sizokutshela ngazo zonke izici nokubaluleka kwezitezi ezishisayo.
2 Izitezi ezishisayo, izinga lokushisa nokuphakama
3 Izinhlobo zezitezi ezishisayo
3.1 Iphansi elifudumele elifudumele
3.2 Phansi kwe-Premontane thermal
3.3 Phansi okushisa okufudumele
3.4 Indawo ebandayo eshisayo
3.5 Isitezi seMoor
3.6 Icy floor
Izitezi zobumba zichazwa njengokuhluka kwesimo sezulu okwenzeka ezindaweni ezinezintaba. Ukukhululeka kuthinta nemvula, ngoba imimoya enomswakama ishayisana nezintaba futhi ijwayele ukunyuka. Izitezi ezishisayo zivame ukwaziswa kakhulu endaweni yamadolobha, ngenkathi isezindaweni ezinamazinga okushisa aphansi azichazwa kahle. Lokhu kungenxa yokuthi izinga lokushisa ezindaweni ezipholile nezibandayo zithinteka kakhulu ukwehluka konyaka kumisebe yelanga.
Uma sihlaziya umongo, siyabona ukuthi kukhona ukuhluka okuhlukile kokuphakeme futhi yikho okuchaza ukwehluka okuphawulekayo kwezinga lokushisa. Ngale ndlela okungenani kusungulwa phansi phansi okushisayo okungu-5, okuphansi kakhulu kube yiphansi elifudumele bese kuba phansi, kubanda, kubanda futhi kube neqhwa. Esigabeni ngasinye, kunqunywa ukuphakama kokuhluka kobude bokushisa, kanye nezinye izici ezihambisanayo.
Ukwahlukaniswa kwezitezi ezishisayo kuqhamuka ngokuyisisekelo kusuka ebangeni lokushisa elitholakala ngokusobala endaweni yethropical. Endaweni efudumele, izinga lokushisa liyancipha ngokuphakama, kepha akuwona umphumela onjalo. Lokhu kungenxa yokuthi ezindaweni ezifudumele kunezinye izinto ezinquma kakhulu, njenge-latitude. I-Latitude ingesinye seziguquguquko ezithonywe yimisebe yelanga eyitholayo kuye ngokuma kwethambeka. Engxenyeni yezindawo ezishisayo kucishe kube ngumbiko wemisebe yelanga efikayo kanye nesimo somoya nemvula.
Izitezi ezishisayo, izinga lokushisa nokuphakama
Izinga lokushisa nobubanzi yizinto eziguqukayo eziyinhloko ezichaza izisekelo ezihlukile zokushisa. Umoya uyashisa ngenxa yokhetho olwenziwe kabusha olufinyelela phansi futhi nomoya oshisayo wehla ngamandla, ngakho-ke, uma ulula, uvama ukukhuphuka. Izinga lokushisa elijwayelekile livame ukwehla phakathi kuka-0.65 no-1 degrees kuwo wonke amamitha ayi-100 lapho ukuphakama kukhuphuka khona.
Intaba nokuphakama kwentaba ngayinye kuthinta nombuso womoya nemvula. Lokhu kungenxa yokuthi uma intaba ingenelela endleleni yemimoya enomswakama, iyakhuphuka futhi igcine igeleza engxenyeni ephakeme kakhulu yentaba. Uma ukuphakama kwentaba kuphakeme, imimoya iyaphola futhi umswakama uyajiya ebangeni eliphakeme ukudala imvula. Ezintabeni eziphakeme, okuphakelayo kuvame ukuphatha ukukhipha umswakama endaweni enomoya futhi emthambekeni we-leeward kuvame ukoma.
I-Latitude ukuma kwendawo maqondana ne-Equator futhi kuthinta phansi okushisayo esimweni semisebe yelanga unyaka wonke. Kusukela kububanzi sithola ukuthi indlela imisebe yelanga ethonya ngayo umugqa wethropical iyunifomu. Akunandaba ukuthi likuphi ilanga lapho lizungeze ilanga, ngoba indawo eshisayo ithola imisebe yayo njalo. Ngakolunye uhlangothi, sinakho lokho, ezindaweni eziphakeme, lokhu akwenzeki. Kungenxa yokuthambekela kwe-eksisi yomhlaba okwenza imisebe yelanga ishaye Ngendlela ethambekele futhi ukuphakama akulishintshi kakhulu izinga lokushisa, ngoba imisebe yelanga incane.
Izinhlobo zezitezi ezishisayo
Kukhona cishe izinhlobo ezi-5-6 zezitezi ezishisayo endaweni yezindawo ezisentabeni. Umehluko oyisisekelo walezi ziphansi kungukushisa. Ake sibone ukuthi yiziphi izinhlobo ezahlukahlukene ezikhona:
Iphansi elifudumele elifudumele
Kuyinto eyodwa eveza amazinga okushisa aphezulu ebangeni le- Ama-degree angama-28 ngokwesilinganiso emkhawulweni wawo ophansi kanye nama-degree angama-24 endaweni ephakeme ngamamitha ayi-900-1000 ngaphezu kolwandle. Kulesi sigaba esishisayo kuhlinzekwa imvelo yehlathi lemvula elishisayo, amahlathi ahlabayo, ama-savanna kanye nezinye zezindawo ezomile nezingenamanzi omhlaba. Engxenyeni engezansi yezindawo ezise-Ecuador, kutholwa imvula enkulu ngenxa yengqungquthela yemimoya enomswakama evela kuwo womabili ama-hemispheres.
Phansi kwe-Premontane thermal
Kuyaziwa nangokuthi igama lesitezi esifudumele okuhlanganisa izindawo ezitholakala phakathi kwamamitha ayi-900-1700 ngaphezu kogu lolwandle. Ifinyelela emazingeni okushisa aphakathi nendawo angama-18-24 degrees. Nawa amahlathi amafu asezintabeni aphansi kanye nemvula ye-orographic eyenzekayo. Le mvula ingenxa yalezo zomoya ezikhuphukayo ezigoqana zenze amafu futhi zikhiqize imvula.
Phansi okushisa okufudumele
Kuyaziwa nangokuthi igama le-mesothermal. Izindawo ze phakathi kwamamitha ayi-1000-2000 ngaphezu kogu lolwandle. Izinga lokushisa elijwayelekile lizungeze ama-degree ayi-15-18, ukufinyelela kuma-degree angama-24 kwezinye izindawo. Kulezi zindawo ihlathi eliphakeme lamafu lakhiwa futhi ezindaweni ezishisayo amahlathi e-coniferous. Lapha kukhona nesenzeko semvula ye-orographic ezimvuleni eziqondile.
Indawo ebandayo eshisayo
Kuyaziwa nangokuthi igama le-microthermal. Kuyinto phansi lapho amazinga okushisa aphansi evelele khona, ngokwesilinganiso mayelana no-15-17 kuya ku-8 degrees. Imvamisa iba sezingeni eliphakeme phakathi kwamamitha ayi-2000-3400 ngaphezu kolwandle. Lapha kufika umkhawulo wezihlahla, ngakho-ke ukuphakama okuphezulu kwalolu hlobo lwefomu lokuphila olungathuthuka. Izinhlobo kuphela ezijwayele lezi zimo zezulu ezingakhula.
Yileso siqeshana esishisayo esiphakathi Amamitha angama-3400-3800 ngaphezu kogu lolwandle namazinga okushisa ehla esuka ku-12-8 kuye ku-0 degrees. Amazinga okushisa asebusuku afinyelela eqandeni futhi alethe imvula enjengeqhwa. Kwezinye izimo kuba nemvula eyanele, kodwa iningi ukutholakala kwamanzi kunomkhawulo.
Imvamisa kwenzeka ikakhulukazi ezindaweni eziphakeme kakhulu nezome kakhulu kwazise imimoya efika ikhiphe wonke umswakama wayo emgwaqeni.
Imvamisa itholakala phakathi kwamamitha ayi-4.000-4.800 ngaphezu kolwandle futhi ihambelana nendawo yeqhwa elingapheli. Lapha imvula isesimweni seqhwa kanti amazinga okushisa aphansi avimbela ukuncibilika kwawo, kulimaza indawo elanga ngobuningi.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngezindawo ezishisayo nezici zazo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Isimo Sezulu » Izitezi ezishisayo